မြန့်မာရိုးရာနည်းဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်းတွက်နည်း - Celegroup
Homeေဗဒင္မြန့်မာရိုးရာနည်းဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်းတွက်နည်း
မြန့်မာရိုးရာနည်းဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်းတွက်နည်း
November 24, 2021 Celegroup1975 ေဗဒင္ 0
အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။
ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ ထို့နောက် အကြွင်း ၄ ဟောကိန်းအား ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်
အလွန်ဆိုးသော အတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ ဦးပေါင်းစည်းက စီးပွား ဖြစ်ထွန်းကိန်းမရှိ၊ ငွေကြေး စုဆောင်း၍ မရ။ ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ တရိရိနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေတတ်သည်။
တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်ဝယ် ဟုသော ကိန်းနှင့် အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးစားရှာဖွေလေ ခက်ခဲ ကျပ်တည်းသော အနေထားမျိုးဖြစ်လေ ဟုသာ။
အလွန်ကောင်းသော အတွဲဖြစ်သည်။ စီးပွားတက်မည်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မည်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ပြည့်စုံသာယာခြင်း၊ အခွင့်လမ်း များစွာ ရရှိခြင်းများ ကြုံမည်။
ဝန်ထမ်းများ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ကြီးမားမည်။ မွေးဖွားသော သားသမီးများသည်လည်း ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်။
၃ကြွင်း ။ ရွှေသီတာစုံပျံမွှေး၊ ဂုဏ်ဟန့်သေး ဆင်းရဲလိမ့်သာ။
နှစ်ဦးပေါင်းဖက်၍ ကောင်းသောကျော်ကြားခြင်းများရှိသော်လည်း၊ စီးပွားတွင် ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိ။ ငွေ မည်မျှဝင်စေ ရသလောက်ပြန်ကုန်မည်။စီးပွားဖြစ်လိုက် ပြန်ကုန်လိုက်နှင့် ဘဝတူ အချင်းချင်းပင် မိမိက ပိုမို ချို့တဲ့သလိုဖြစ်နေမည်
အလုပ်စီးပွားတွင် အောက်ကျ သလိုဖြစ်ပြီးမှ တော်သင့်ရုံပြေလည်မည်။ နှစ်ဦးပူးတွဲနေက ငွေကုန်များမည်၊ လုပ်ငန်းသဘောအရ ခွဲခွာ လုပ်ကိုင်က ငွေစုဆောင်းမိမည်။ သားသမီးများအား ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ပျိုးထောင်ရမည်။ သားသမီးကောင်းကျိုးကိုဖြင့် ခံစားရမည်။
အထူးကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားအောင်မြင်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်း အထင်ရှားရှိမည်။ ဘဝတူတန်းတူများကြား အသာစီးရမည်။ လူတမ်းစေ့အထက် ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရမည်။
အလွန်ကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းစင်၍ ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံပြီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မြင့်မားမည်။
ျမန္႔မာ႐ိုးရာနည္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးနည္းတြက္နည္း
ဥပမာ.. တနဂၤေႏြ(၁) +ဗုဒၶဟူး(၄) ၁+၄=၅. ျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကို ၅ျဖင့္ ေျမာက္ရမည္ ။ ၂၅ ရသည္။ ထို႔၂၅ အား ၇ ျဖင့္စားရမည္။ အႂကြင္း ၄ ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အႂကြင္း ၄ ေဟာကိန္းအား ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္
အလြန္ေကာင္းေသာ အတြဲျဖစ္သည္။ စီးပြားတက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မည္။ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၊ ျပည့္စုံသာယာျခင္း၊ အခြင့္လမ္း မ်ားစြာ ရရွိျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္။
၃ႂကြင္း ။ ေ႐ႊသီတာစုံပ်ံေမႊး၊ ဂုဏ္ဟန္႔ေသး ဆင္းရဲလိမ့္သာ။
ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္၍ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ စီးပြားတြင္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိ။ ေငြ မည္မွ်ဝင္ေစ ရသေလာက္ျပန္ကုန္မည္။စီးပြားျဖစ္လိုက္ ျပန္ကုန္လိုက္ႏွင့္ ဘဝတူ အခ်င္းခ်င္းပင္ မိမိက ပိုမို ခ်ိဳ႕တဲ့သလိုျဖစ္ေနမည္
အသက္ႀကီးေလ စီးပြားတိုး ေလျဖစ္ပါသည္။ ေႁခြရံသင္းပင္းေပါမ်ားမည္။သားသမီးအက်ိဳး ခံစားရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈ႕မ်ိဳး ႀကဳံရေပမည္။
ျဝကြင္း။ သုညက်န္လွ်င္ လုံမေမာင္ႏွံ အို ဆုံးႏိုင္မွ်ေလး။
အလြန္ဆိုးေသာ အတြဲျဖစ္သည္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြရမည္။ ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္သည့္ နဂိုကာလမွစ၍ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းေစတက္သည္။ ဝင္သမွ်ေငြမွာ အဖက္မတင္ေစတတ္ပါ၊
အက်ိဳးျမတ္ရရွိ၍ စီးပြားျဖစ္ ထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း တခုမဟုတ္တခု စိတ္ေသာက ေရာက္စရာမ်ား ႀကဳံေစတတ္သည္။
မိတ္ေဆြ အေနျဖင့္ ဆိုးေသာအတြဲမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါက ၊ စိတ္အေနာက္ယွတ္ႀကီးစြာျဖစ္ရန္မလိုပဲ ကံ၊ဥာဏ္၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးျဖင့္ျပည့္စုံစြာျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝကို ျဖတ္သန္းေသာ္ဒုကၡဆင္းရဲကင္းစင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း……….
မွတ္သားဖူးေသာ ပညာရပ္တခုအား တင္ျပေပးျခင္ုးျဖစ္ပါသည္။
၆ကြွင်း။ ပြင်ပပူးမင်းက သူဌေးမှန် ငြိမ်းလိမ့်နှစ်တန်။
အလွန်ဆိုးသော အတွဲဖြစ်သည်၊ ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့် စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေရမည်။ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်သည့် နဂိုကာလမှစ၍ တဖြေးဖြေးကျဆင်းစေတက်သည်။ ဝင်သမျှငွေမှာ အဖက်မတင်စေတတ်ပါ၊
မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် ဆိုးသောအတွဲများထဲတွင် ပါဝင်နေပါက ၊ စိတ်အနောက်ယှတ်ကြီးစွာဖြစ်ရန်မလိုပဲ ကံ၊ဥာဏ်၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြင့် မျက်မှောက်ဘဝကို ဖြတ်သန်းသော်ဒုက္ခဆင်းရဲကင်းစင်နိုင်ပါကြောင်း……….
မှတ်သားဖူးသော ပညာရပ်တခုအား တင်ပြပေးခြင်ုးဖြစ်ပါသည်။